सन्दिप लामिछाने बारे प्रधानमन्त्रीले भने ‘दुई चार डल्ला के फ्याँक्न पाएको थियो सन्दीप लामिछाने चम्कियो” ! || सुनौलो नेपाल
सन्दिप लामिछाने बारे प्रधानमन्त्रीले भने ‘दुई चार डल्ला के फ्याँक्न पाएको थियो सन्दीप लामिछाने चम्कियो” !
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा क्षमता भएका युवाहरूको कमी नभएको बताएका छन्। उनले नेपालीले अवसर नपाएर क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको मात्र भएको बताएका हुन्। बिहीबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको टान कान्तिपुर हिसान एडुकेसन फेयरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब देशमा रहेका क्षमताको सही पहिचान र सदुपयोग हुने बताएका हुन्। युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको उदाहरण दिँदै ओलीले क्षमताको सही पहिचान भए नेपालीले विश्वमा नाम चम्काउन सक्ने बताए। उनले भने ‘दुई चार डल्ला के फ्याँक्न पाएको थियो सन्दीप लामिछाने चम्कियो। सन्दीपले क्रिकेटमा चमत्कार गरेका छन्।’ उनले थपे, ‘उनलाई गायन वा चित्रकलामा लगाएको भए हुँदैनथ्यो।
‘ नेपालमा क्षमतावान युवाहरूको कमी नभएको दावी गर्दै उनले भने, ‘दुनियाँले हन्टिङ गरिरहोस् हामी सन्दीप लामिछाने उत्पादन गरिरहन्छौँ।’ युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेलेर नेपाल फर्किएका छन्। उनले अन्तिमका तीन खेलमा मैदानमा उत्रिने मौका पाएका थिए। जसमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनको प्रदर्शनलाई लिएर विश्व क्रिकेट जगतमा चर्चा भइरहेको छ। सोही सन्दर्भमा ओलीको अभिव्यक्ति आएको हो। ओलीले बालबालिकालाई क्षमता र रुचीअनुसारको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले कुनै विद्यार्थीलाई पनि असक्षम भनेर ट्याग लगाउने नहुने बताए। नेपालमा पछिल्लो समय ‘फेल’को व्यवस्थालाई हटाएकामा उनले खुसी प्रकट गरेका थिए।
उनले त्यसो गरेर कसैको पनि क्षमता र आत्मविश्वासमा खेलवाड गर्न नहुने बताए। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासको खाका तयार पारिरहेको र अब प्रमाणपत्र देखाएर जागिर खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए। उनले विकासका कुरा गर्दा केही मान्छेले हावादारी गफ भनेको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए। विकास एकदुई दिनमै नआउने र सबै जनताको सहभागीता रहनुपर्ने उनको धारणा थियो। ओलीले शिक्षाका नाममा हुने व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नेपनि बताएका छन्।
उनले गुणस्तरीय शिक्षा भन्दैमा जति पनि शुल्क लिन नपाइने र नदिइने बताए। उनले नीजि क्षेत्रलाई शिक्षामा गरेको लगानी र योगदानको कदर गर्ने तर यसको माध्यमबाट हुने लुटलाई नसहने बताए।